“Hada in aan shaqeeyo oo kaliya ayaan rabaa!” | Somaliska
Waa wareysiga Dahabo, gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadankan Sweden waxaa Wareysi la yeeshay wargeyska Aftonbladet...Hadaba warbixinta uu ka qoray wargeyska gabadha Soomaliyeed "raali noqda Swedish-keyga waa dafiic" . TROLLHÄTTAN. Sadex sano ka hor ayay Dahabo ka timid Somaliya, iyadoo wadata labo ka mid ah shanteeda caruurta, jaakad iyo katiinad dahab ah. Gurigeeda waxaa karsamaaya digsiyo waaweyn, moobeelo kala duwan ayaa halkaan iyo halkaas ka dhacaya, albaabaduna marna way xirmayaan marna way furmaayaan marka ilmaha ay soo galaan marna baxaan. Dahabo inta badan Radiyaha ayay dhageysataa, luqada cusub way ku adagtahay. Dahabo ka dib nolosha cusub ee ay bilowday, xoriyada ay raadineyso waa shaqo, in ay is dabarto, ay xor noqoto. Marka yaa qaadanaya gabar geesi ah oo firfircoon? su'aashu waa midaas. Miiska jikada ayay ku celineysaa casharkii loo soo dhigay, waxay maraysaa qeybtii ugu dambeysay ee Swedishka loogu tala galay dadka soo galootiga ah, maanta waxaa u taala in ay ka waranto dhalashada Theo. Muxuu sameeyaa Theo marka uu gaaro lix sano?. Waan qosolnaa, Dahabo waa qosoley, ayadoo tani ka dhigeyso qof cajiib ah marka la eego taariikhdeeda. Dahabo waxay dhalatay 1964tii ayadoo ahayd mid ka ah labo caruur ah oo uu dhalay nin dukaanle ah, 17 sano markay jirtay ayay ka ka hartay waxbarashadii si ay u kaalmeyso ayaydeed oo xanuunsan. Ka dib waxay guursatay dhaqtar ay jecleyd. Waxay isku dhaleen 6 caruur ah oo shan ay noolyihiin, iyadoo sidoo kale ku caawin jirtay aabaheed dukaankiisa. Markii dagaalka sokeeye uu bilowday shaqadii way yaraatey, cusbitaalkiina lacag yar ayuu bilaabey in uu bixiyo. 3 bilood oo ka mid ah sanadkii 2007, colaada Somaliya waxay gaartay heerkii ugu sareeyay, Dahabo aabaheed iyo walaalkeed waa la dilay, sababta lama yaqaan, waxaa laga yaabaa maleeshiyaadku in ay rabeen guriga. Ka dibna Dahabo waxay ku soo baraarugtay subax in la mariyay dukaankii ay masuulka ka aheyd. Markii colaadu ay burburisay reerkii, Dahabo waxaa u suurto gashay in ay iibiso dahabkeedii, waxay aadey Ethiopia ka dibna Sweden. Maalinka ka mid ah bishii July 2007 ayay ayraboorka ka soo degtay. Waxaa loo qaaday Älvsbyn, ka dib caawimaada laanqeyrta cas waxaa loo geeyay cunugeedii ugu yaraa, hada waxay la nooshahay 3 ka mid ah caruurteeda. Halkaan way jeclaanlahayd in ay ku noolaato, caruurtu iskuulka way ku wanaagsan yihiin xaafadana waxay ku leedahay walaasheed iyo dumar saaxiibo ah, shaah ayay wada cabaan Somaliya iyo Sweden ayay ka sheekeystaan. Way jecelyihiin Sweden, ma yaqaanan wax dumar swedish ah, mana la hadlin, laakiin waxay eegaan dumarka wadanka cusub ee ay joogaan iyo xoriyada ay dumarka soomaaliyeed ka heleen halkaan. Dahabo waxay taqaanaa gabar Soomaliyeed oo ka shaqeysa iskuulka, Duniyo. waxay kaloo maqleen gabdho kale oo meesha degan kana shaqeeya nadaafada. Duniyo waxay ku jirtaa wareysigeena, waxaan wada fariisanay fadhiga anagoo cuneyna sambuuso macaan oo hilib laga buuxiyay. Duniyo waxay ka shaqeysaa macalin guriga oo ilmaha Soomaalida wax bara, waxaan ka wada hadalnay in baahida Sweden ay koreyso. Maraykanka magaalada Miniyaabulis in darajada dumarka soomaalidu ay sareyso , boqolkiiba 60 ay yihiin kuwo ganacsi leh. laakiin Dahabo halkaan dukaan kama furan karto ayay tiri Duniyo. "Waa in ay dulqaadataa". Waan ku qosolnay fikrada dukaanka, sidee u muuqan la hayd, ka dibna canshuuraha iyo ogolaansha. Dahabo waxay ku riyooneysaa in ay yeelato guri yar iyo baabuur. waligeed way jeclayd in ay gaari wado. Macalinkeeda waxbarahada Marie Brown waxay ku talineysaa dulqaad. Dahabo wax xirfad ma leh oo ay ku shaqeyso ilaa inta ay ka baraneyso luuqada Swedishka. waxbarashadeeda ayay sii wadankartaa, baraatikana way caawin laheyd. "laakiin in aan shaqeeyo ayaan rabaa" ayay tiri Dahabo. Katiinadeeda dahabka ah ayay taataabaneysaa, waa waxa kaliya ee ay ka heysato Somaliya, sanad ka hor ayaa ugu dambeysay maqalka labada caruurta ee ka maqan. Waa arin aad u adag. Ka dibna dhaqdhaqaaq ayay sameeyeen indhaheeda, way is adkeysay , waana dhoola cadeysay, maxay sameysaa in ay dhoola cadeyso mooyee? Waxaad warkaan oo Swedish ka aqrisan kartaa http://www.aftonbladet.se/jobbresan/article7020527.ab Ka raali noqda haddii turjumaadu ay 100% sax aheyn.
Waa wareysiga Dahabo, gabar Soomaaliyeed oo ku nool wadankan Sweden waxaa Wareysi la yeeshay wargeyska Aftonbladet…Hadaba warbixinta uu ka qoray wargeyska gabadha Soomaliyeed “raali noqda Swedish-keyga waa dafiic” .
TROLLHÄTTAN. Sadex sano ka hor ayay Dahabo ka timid Somaliya, iyadoo wadata labo ka mid ah shanteeda caruurta, jaakad iyo katiinad dahab ah.
Gurigeeda waxaa karsamaaya digsiyo waaweyn, moobeelo kala duwan ayaa halkaan iyo halkaas ka dhacaya, albaabaduna marna way xirmayaan marna way furmaayaan marka ilmaha ay soo galaan marna baxaan.
Dahabo inta badan Radiyaha ayay dhageysataa, luqada cusub way ku adagtahay.
Dahabo ka dib nolosha cusub ee ay bilowday, xoriyada ay raadineyso waa shaqo, in ay is dabarto, ay xor noqoto.
Marka yaa qaadanaya gabar geesi ah oo firfircoon? su’aashu waa midaas.
Miiska jikada ayay ku celineysaa casharkii loo soo dhigay, waxay maraysaa qeybtii ugu dambeysay ee Swedishka loogu tala galay dadka soo galootiga ah, maanta waxaa u taala in ay ka waranto dhalashada Theo. Muxuu sameeyaa Theo marka uu gaaro lix sano?.
Waan qosolnaa, Dahabo waa qosoley, ayadoo tani ka dhigeyso qof cajiib ah marka la eego taariikhdeeda.
Dahabo waxay dhalatay 1964tii ayadoo ahayd mid ka ah labo caruur ah oo uu dhalay nin dukaanle ah, 17 sano markay jirtay ayay ka ka hartay waxbarashadii si ay u kaalmeyso ayaydeed oo xanuunsan. Ka dib waxay guursatay dhaqtar ay jecleyd. Waxay isku dhaleen 6 caruur ah oo shan ay noolyihiin, iyadoo sidoo kale ku caawin jirtay aabaheed dukaankiisa.
Markii dagaalka sokeeye uu bilowday shaqadii way yaraatey, cusbitaalkiina lacag yar ayuu bilaabey in uu bixiyo.
3 bilood oo ka mid ah sanadkii 2007, colaada Somaliya waxay gaartay heerkii ugu sareeyay, Dahabo aabaheed iyo walaalkeed waa la dilay, sababta lama yaqaan, waxaa laga yaabaa maleeshiyaadku in ay rabeen guriga. Ka dibna Dahabo waxay ku soo baraarugtay subax in la mariyay dukaankii ay masuulka ka aheyd.
Markii colaadu ay burburisay reerkii, Dahabo waxaa u suurto gashay in ay iibiso dahabkeedii, waxay aadey Ethiopia ka dibna Sweden. Maalinka ka mid ah bishii July 2007 ayay ayraboorka ka soo degtay. Waxaa loo qaaday Älvsbyn, ka dib caawimaada laanqeyrta cas waxaa loo geeyay cunugeedii ugu yaraa, hada waxay la nooshahay 3 ka mid ah caruurteeda.
Halkaan way jeclaanlahayd in ay ku noolaato, caruurtu iskuulka way ku wanaagsan yihiin xaafadana waxay ku leedahay walaasheed iyo dumar saaxiibo ah, shaah ayay wada cabaan Somaliya iyo Sweden ayay ka sheekeystaan.
Way jecelyihiin Sweden, ma yaqaanan wax dumar swedish ah, mana la hadlin, laakiin waxay eegaan dumarka wadanka cusub ee ay joogaan iyo xoriyada ay dumarka soomaaliyeed ka heleen halkaan.
Dahabo waxay taqaanaa gabar Soomaliyeed oo ka shaqeysa iskuulka, Duniyo. waxay kaloo maqleen gabdho kale oo meesha degan kana shaqeeya nadaafada. Duniyo waxay ku jirtaa wareysigeena, waxaan wada fariisanay fadhiga anagoo cuneyna sambuuso macaan oo hilib laga buuxiyay.
Duniyo waxay ka shaqeysaa macalin guriga oo ilmaha Soomaalida wax bara, waxaan ka wada hadalnay in baahida Sweden ay koreyso. Maraykanka magaalada Miniyaabulis in darajada dumarka soomaalidu ay sareyso , boqolkiiba 60 ay yihiin kuwo ganacsi leh. laakiin Dahabo halkaan dukaan kama furan karto ayay tiri Duniyo.
“Waa in ay dulqaadataa”.
Waan ku qosolnay fikrada dukaanka, sidee u muuqan la hayd, ka dibna canshuuraha iyo ogolaansha.
Dahabo waxay ku riyooneysaa in ay yeelato guri yar iyo baabuur. waligeed way jeclayd in ay gaari wado.
Macalinkeeda waxbarahada Marie Brown waxay ku talineysaa dulqaad. Dahabo wax xirfad ma leh oo ay ku shaqeyso ilaa inta ay ka baraneyso luuqada Swedishka. waxbarashadeeda ayay sii wadankartaa, baraatikana way caawin laheyd.
“laakiin in aan shaqeeyo ayaan rabaa” ayay tiri Dahabo.
Katiinadeeda dahabka ah ayay taataabaneysaa, waa waxa kaliya ee ay ka heysato Somaliya, sanad ka hor ayaa ugu dambeysay maqalka labada caruurta ee ka maqan. Waa arin aad u adag.
Ka dibna dhaqdhaqaaq ayay sameeyeen indhaheeda, way is adkeysay , waana dhoola cadeysay, maxay sameysaa in ay dhoola cadeyso mooyee?
Waxaad warkaan oo Swedish ka aqrisan kartaa http://www.aftonbladet.se/jobbresan/article7020527.ab
Ka raali noqda haddii turjumaadu ay 100% sax aheyn.